Sagal waa gabadh da 'yar oo Soomaaliyeed oo ka soo carartay waddankeedii sababta oo ah qoyskeedu waxay dalbadeen in gabadheeda la gudo. Way diiday. Waxay sheegtay inay tahay haween ey wax bartay oo aysan dooneynin in carruurteedu ay soo maraan wixii lagu qasbay inay u adkaysato sidii ilmo ahaan. Waxay rabtay inay aado Yurub si ay nolol wanaagsan ugu hesho nafteeda iyo carruurteeda. Waxay timid Sweden 2014..
“Waxaan u maleynayay haddii aan aado Yurub in gabarteyda ay amaan noqon laheyd oo aan ku sii wadan karo waxbarashadeyda iyo shaqadeyda. Waxaan rajeynayay inaan helo ogolaansho deganaansho oo aan ku noolaado nolol farxad leh oo aan helo daryeel caafimaad oo wanaagsan. Laakiin taasi maahan sida ay u shaqeyso. Illaa iyo hadda wax dukumenti sharci ah ma haysto, gurina ma haysto. Qoyskayga ma helin kaalmada dhaqaale. Waxaa naloo sheegay inaysan xaq u lahayn inaan halkaan joogno. ”
Sagal diyaar uma ahayn soo dhawayntii ay ka heshay dalkii ay u tagtay. Maanta, waxay ku nooshahay xaalad xasillooni darro, iyadoo sugaysa go’aan ku saabsan kiiskeeda. Dhibaatooyinka ayaa saameeyay caafimaadkeeda, waxay si joogto ah uga walwalaysaa mustaqbalka isla markaana caloosheeda ayaa ka sii dartay.
“Waxaan halkaan joogay shan sano. Waligay ma helin wixii aan rajaynayay. Xaqiiqdii, dhibaatooyinkaygu way sii xumaadeen. Bal ka fikir waxa go'aamada taban ee joogtada ah ay ku sameeyaan qofka! Sababtaas awgeed ayaan wakhti badan ku qaatay in aan ka fikiro. Laakiin kuma noqon karo meeshii aan ka cararay. ”
Sweden waxay ahayd wadankii ugu horreeyay ee Midowga Yurub ee ay yimaaddaan iyada oo la raacayo qawaaniinta aysan meel kale u aadi karin si ay u codsato rukhsad degenaansho. Waxay sii wadaysaa halganka ay kaga dhaadhicinayso mas'uuliyiinta in aysan dib ugu laaban karin Soomaaliya. Waxay u ahayd qareeno iyo ururo aan dowli ahayn si ay u helaan taageero.
“Qof walba wuxuu ii sheegayaa inay tahay arin adag. Waxay ka qaataan nuqullada dukumintigayga waxayna yiraahdaan waa mid qalafsan. Waxay dhaheen way hubin doonaan. Laakiin ilaa hadda cid i caawisay ma jiraan. ”